Mon, Jul 13, 2020 at 6:38am
काठमाडौँ, १२ असोज नेपालमा पनि स्त्री रोगसम्बन्धी ल्याप्रोस्कोपी (दूरबिनबाट गरिने) सर्जरीको शुरुआत भएको छ । विश्वका अन्य देशमा धेरै पहिलेदेखि नै प्रयोगमा आएतापनि नेपालका लागि भने यो नयाँ प्रविधि हो । यो प्रविधिको शुरुआत जर्मनीबाट भएको हो । यस प्रविधिमा भएका लगातार अध्ययन–अनुसन्धानबाट पेट चिरेर गर्ने शल्यक्रिया भन्दा यो विधि सजिलो र भरपर्दो हो भनेर सिद्ध भएको छ । पेटबाट बच्चा निकाल्ने..
काठमाडाैँ, १२ असाेज । आज सेप्टेम्बर २९, विश्व मुटु दिवस । नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ । मुटु स्वास्थ्य र मुटु सम्बन्धी विभिन्न स्वास्थ्य समस्याबाट जोगिने उपायबारे सचेत गराउने उद्देश्यसहित आइतबार विश्व मुटु दिवस मनाईँएको हो । बदलिँदो जीवनशैली र सन्तुलित आहारमा अमी हुँदा बिकासशील मात्र होइन बिकसित मुलुककै लागि पनि मुटु रोग चुनौति बनिरहेको छ । मुटु सम्बन्धी रोग र त्यसबाट जोगिने..
काठमाडौँ, १२ असोज । टेकुस्थित शुक्रराज सरुवा रोग तथा ट्रपिकल अस्पतालमा दैनिक दुई सय जना कुकुरले टोकेर रेबिजविरुद्धको सुई लगाउन आउने गरेका छन् । ‘‘दैनिक रूपमा दुई सयको सङ्ख्यामा रेबिजविरुद्धको सुई लगाउन आउनेको सङ्ख्याले पनि प्रष्ट हुन्छ । काठमाडौँ उपत्यकामा धेरै मानिसलाई कुकुरले टोक्ने गरेको छ । कोही व्यक्ति भने लक्षण देखिसकेपछि उपचारका लागि आउने गर्छन्,’’ अस्पतालका प्रवक्ता तथा प्रमुख कन्सलटेन्सी..
काठमाडाैं, ११ असाेज । यहाँ अस्पताल र औषधि पसलको सङ्ख्या वृद्धि भए पनि आयुर्वेदिक उपचार गर्ने बिरामीको सङ्ख्यामा दिनहुँ वृद्धि हुँदै गएकोे छ । अस्पतालको उपचार पद्दतिले रोग निको हुन नसक्दा बिरामीको सङ्ख्यामा वृद्धि भई आयुर्वेदिक उपचारको माग बढेको हो । बेसीशहर नगरपालिका–१० बाँझखेतमा रहेको जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रमा एक दुईजना आउने गरेकामा केही समयबाट दैनिक ३०÷३५ जनाको हाराहारीमा आयुर्वेदिक उपचारका लागि..
काठमाडौँ, १० असोज सुरक्षितभन्दा असुरक्षित गर्भपतन सेवा लिनेको सङ्ख्या बढीरहेको छ । अहिले पनि ५८ प्रतिशत महिलाले असुरक्षित र ४२ प्रतिशतले मात्र सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिइराखेको स्वास्थ्य सेवा विभाग परिवार स्वास्थ्य महाशाखाले जनाएको छ । महाशाखाका अनुसार देशभरका एक हजार ३०० सूचीकृत गर्भपतन सेवा केन्द्रबाट गत वर्ष करीब एक लाख महिलाले गर्भपतन गराएका थिए । तीमध्ये ११ प्रतिशत त किशोरी नै रहेका..
काठमाडौं, १० असाेज । नेपालमा गर्भपतनकाे अवस्था भयावह बन्दै गएकाे छ । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा झन्डै एक लाख महिलाले गर्भपतन गराएका छन्। जसमध्ये ११ प्रतिशत किशोरी छन्। औषधि खाएर र शल्यक्रियामार्फत ९५ हजार ३ सय ६९ जना महिलाले गर्भपतन गराएकाे स्वास्थ्य सेवा विभाग परिवार कल्याण महाशाखाले जनाएकाे छ। यो तथ्यांक नेपाल सरकारबाट सुरक्षित गर्भपतन गराउने संस्थाहरुको मात्र हो। त्यसबाहेक अवैध रुपमा गर्भपतन गराउनेको..
काठमाडौँ, ९ असोज सङ्घीय सरकारका तीन मन्त्रालयले विद्यालय तहमा अध्ययन गर्ने छात्रालाई निःशुल्क प्याड वितरण गर्ने तयारी गरेका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयले समन्वयमा यससम्बन्धी नयाँ नीतिको मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएका छन् । नीति कार्यान्वयनको जिम्मा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई दिइएको आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा महिला, बालबालिका तथा..
काठमाडौँ, ८ असोज स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले औषधि र चिकित्सा क्षेत्रमा प्रयोग हुने उपकरणको व्यवस्थापन, अनुगमन तथा नीति निर्माण गर्न मन्त्रालयमा नयाँ महाशाखा स्थापना गर्ने तयारी गरेको छ । औषधि क्षेत्रको काम औषधि व्यवस्था विभाग र उपकरण क्षेत्रका काम चिकित्सा महाशाखाले गर्दै आएका थिए । विभागका कार्यक्षेत्रलाई असर नपुग्ने र विभागको कामलाई समन्वयसमेत गर्ने महाशाखाले काम गर्नेछ । अन्तरराष्ट्रिय फर्मास्युटिकल्स दिवसका अवसरमा आज..
डोटी, ७ असोज जिल्लामा पछिल्लो केही हप्तादेखि भाइरल ज्वरोका बिरामीको सङ्ख्या दिनहुँ थपिँदै छ । यहाँको जिल्ला अस्पताललगायत अन्य स्वास्थ्य संस्थामा भाइरल ज्वरोका बिरामीको सङ्ख्या एकाएक बढेको स्वास्थ्यकर्मी बताउँछन् । पहिले १०० जनासम्म बिरामी आउने गरेका भए पनि अहिले ३०० सम्म पुग्न थालेको जनाइएको छ । जिल्ला अस्पताल डोटीमा उपचारका लागि पुग्नेमध्ये अधिकांश स्थानीयवासीमा भाइरल ज्वरो र निमोनियाको संक्रमण देखापरेको जिल्ला अस्पतालका..
काठमाडौँ, ६ असोज सरकारले तोकिएको भन्दा बढी शुल्क लिएका मेडिकल कलेजलाई एक महीनाभित्र शुल्क फिर्ता नगरे कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने भएको छ । आज गृह मन्त्रालयमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलसहित दुई मन्त्रालयसम्बद्ध पदाधिकारीको बैठकले विभिन्न मेडिकल कलेजले तोकिएको भन्दा बढी शुल्क लिए शुल्क फिर्ता गर्नुपर्ने निर्णय गरेको हो । बैठकले तोकिएको शुल्कभन्दा बढी रकम एक महीनाभित्र फिर्ता गर्न..
चितवन, ६ असोज । जिल्लाका अस्पतालमा चितवनसहित देशका कम्तीमा १८ जिल्लाका डेङ्गु सङ्क्रमितको उपचार भइरहेको छ । स्वास्थ्य कार्यालय चितवनले सङ्कलन गरेको तथ्याङ्कमा केही बिरामीको जिल्ला स्पष्ट नभएको पाइएको छ । कार्यालयका कीट नियन्त्रक राम केसीका अनुसार कम्तीमा १८ जिल्लाका डेङ्गुका बिरामीको यहाँ उपचार भएको छ । उहाँका अनुसार छिमेकी जिल्ला नवलपुर, मकवानपुर, धादिङ, पर्सा, तनहुँ र गोर्खाका बिरामी बढी रहेका छन्..
इलाम, ६ असोज । इलाम कारागारका १५७ कैदीबन्दी एकैपटक बिरामी परेका छन् । केही दिनयता कैदीहरु एकाएक बिरामी पर्दै गएको र बिरामी एक अर्कामा सर्दै जाँदा प्रायः सबै कैदीलाई सङ्क्रमण देखा परेको हो । कैदीलाई टाउको दुख्ने, छाती दुख्ने, वान्ता हुने ज्वरो आउने लक्षण देखा परेको कारागार प्रमुख प्रदीप श्रेष्ठले राससलाई जानकारी दिनुभयो । “एकैपटक ठूलो सङ्ख्यामा कैदी बिरामी परेपछि उपचारमा..
काठमाडौँ, ५ असोज तपाई खेतबारीमा काम गर्न जाँदै हुनुहुन्छ ? आफ्ना घर वरिपरिका झाडी सफा गर्दै हुनुहुन्छ ? अथवा मुसाका बासस्थानतिर केही काम गर्दै हुनुहुन्छ ? होस् गर्नुहोला । कतै मुसाको टोकाइबाट अकालमा तपाईँको मृत्यु पनि हुनसक्छ । पछिल्लो समय मुख्यरूपमा मुसाको टोकाइ र सङ्क्रमणबाट मानवमा लाग्ने स्क्रब टाइफस नामक रोगको सङ्क्रमण अधिकांश जिल्लामा फैलिएको छ । कीटजन्य रोग व्यवस्थापन गर्ने इपिडिमियोलोजी..
काठमाडौँ, ४ असोज हाम्रो नङको रङले हाम्रो स्वास्थ्यबारे धेरै खुलासा गरेको हुन्छ । तसर्थ यदि हाम्रो नङको रङ बदलिँदै छ र पहिलेको तुलनामा निकै पहेँलो हुँदै गएको छ भने यसले हाम्रो शरीरमा रगतको कमी हुँदै गएको जनाउँछ । यसको अर्थ हामीलाई एनिमिया भएको हुनसक्छ । वा यही कुरा हाम्रो मिर्गौला वा कलेजो खराब भएको संकेत पनि हुनसक्छ । अर्कोतिर हाम्रो नङको रंग सेतो..
काठमाडौँ, ४ असोज आज विश्वभर अल्जाइमर्स दिवस मनाइँदैछ । नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ । चिकित्सकका अनुसार अल्जाइमर्स भनेको बुढ्यौलीसँगै स्मरण शक्ति तथा मनमस्तिष्कका अन्य क्षमता क्रमिक रूपमा घट्दै जाने विभिन्न रोगमध्ये सबैभन्दा धेरै देखिने स्वास्थ्य समस्या हो । स्मरण शक्तिसँग सम्बन्धित विभिन्न समस्याका साथमा अस्पतालमा आएर जचाएकाहरूमध्ये ६० देखि ८० प्रतिशत मानिसमा अल्जाइमर्स देखिन्छ । नेपालमा भने अल्जाइमर्सका बिरामीको यकिन तथ्यांक..
काठमाडौँ, ४ असोज । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ)ले १ हजार जनसंख्या बराबर एक चिकित्सक हुनुपर्ने मापदण्ड तोकेको छ । तथ्यांक विभागका अनुसार नेपालको जनसंख्या २ करोड ९६ लाख ९९ हजार ७४७ छ । यसरी हेर्दा २९ हजार ७ सय डाक्टर नेपालका लागि आवश्यक छ । तर, अझै ५ हजार डाक्टर नेपालमा अपुग भएको देखिन्छ । भएका अधिकांश डाक्टर पनि विदेश पलायन..
काठमाडौँ, ३ असोज स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले संरचना तथा दरबन्दी पुनरावलोकन गरी प्रतिवेदन पठाउन आफ्ना मातहतका निकायलाई पत्राचार गरेको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पत्रअनुसार मन्त्रालयले स्वास्थ्य सेवा, औषधि व्यवस्था र आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभागसहित महाशाखा तथा केन्द्र, स्वास्थ्य प्रतिष्ठान, सङ्घीय अस्पताल तथा कार्यालयलाई पत्राचार गरेको हो । मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले स्वास्थ्य सेवाको पनि संरचना तथा दरबन्दी पुनरावलोकन..
काठमाडौँ, ३ असोज । हिमाल, पहाड र तराई भिन्नभिन्न हावापानी र मौसम भएका अधिकांश जिल्लामा डेङ्गु रोग सार्ने ‘एडिस एजेप्टी’ र ‘एडिस एल्बोपिक्टस’ पोथी जातका लामखुट्टे पुगेको पाइएको छ । सो रोग सबै प्रदेशसहित ६८ जिल्ला देखापरेको कीटजन्य रोगको व्यवस्थापन गर्ने निकाय इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले जनाएको छ । मनाङमा समेत एक जनामा डेङ्गु देखापरेको छ । महाशाखाको पछिल्लो विवरणअनुसार रोगका..
मकवानपुर, २ असोज प्रदेश नं ३ मा लामखुट्टेको टोकाइबाट लाग्ने डेङ्गु रोगको प्रकोप बढ्दै गएको छ । प्रदेश नं ३ को सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार यस प्रदेशमा आजसम्म चार हजार ८०० जनालाई डेङ्गु लागेको जनाइएको छ । डेङ्गुगबाट चितवनमा एक हजार ८६०, काठमाडौँमा एक हजार ३७०, मकवानपुरमा एक हजार ११०, ललितपुरमा १७, भक्तपुरमा १४५, धादिङमा ३२, काभ्रेमा १२, नुवाकोटमा ६ जनामा डेङ्गुको..
चितवन, २ असोज संविधान दिवसका अवसरमा यहाँका निजी मेडिकल कलेजले पनि आज बहिरङ्ग सेवा निःशुल्क गरेका छन् । सरकारले सबै सरकारी अस्पतालमा आज एक दिनका लागि बहिरङ्ग सेवा निःशुल्क गर्ने घोषणा गरेको थियो । जिल्लामा रहेका चितवन मेडिकल कलेज र कलेज अफ मेडिकल साइन्सेसले पनि बहिरङ्ग सेवा निःशुल्क गरेका हुन् । चितवन मेडिकल कलेजका व्यवस्थापक पारस अधिकारीले बहिरङ्गका विशेष र सामान्य..
काठमाडौं, २ असोज । असुरक्षित गर्भपतन गराउनेको संख्यामा अझै कमी आएको छैन । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार हरेक एक सय महिलामध्ये ५८ जनाले असुरक्षित गर्भपतन गराउँछन् । प्रतिएक घण्टामा २१ महिलाले असुरक्षित गर्भपतन गराउने गरेको तथ्यांक स्वास्थ्य सेवा विभागको छ । बर्सेनि १ लाख ८६ हजार १ सय ४४ असुरक्षित गर्भपतन हुने प्रजनन स्वास्थ्य क्षेत्रमा क्रियाशील अन्तर्राष्ट्रिय संस्था गुटामाचार..
फलभन्दा उपयोगी अम्बाको पात, यस्ता छन् फाइदा
काठमाडौँ, १ असोज अम्बा हाम्रो घर वरपर पाइने फल हो । यसको फलमा सबैको आँखा जान्छ तर पातलाई वास्ता गर्दैनन् । तर, अचम्मको विषय त यो छ कि अम्बाको पात फलभन्दा पनि बढी उपयोगी हुन्छ । अम्बाको पातमा दर्जनौँ रोग निको पार्न सक्ने औषधीय गुण हुन्छ । यी हुन्, अम्बाको पातका फाइदा : अम्बाको पात खाँदा मुखको छालालाई स्वस्थ र सुरक्षित राख्ने काम गर्दछ..
काठमाडौँँ, १ असोज । करीब छ दशकअघिदेखि नेपालमा व्यवस्थितरूपमा कार्यान्वयनमा आएको परिवार योजना (नियोजन)का कार्यक्रमले यस क्षेत्रमा खासै सुधार ल्याउन सकेको छैन । प्रमुख सूचकहरुमा वर्षाैँदेखि स्थिर रहेकाले कार्यक्रम नै सङ्कटमा पुगेका हुन् । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, परिवार कल्याण महाशाखाका अनुसार ६० वर्षमा परिवार नियोजनको आधुनिक साधन प्रयोगदर ४३ प्रतिशत र पहुँच ५३ प्रशितमाथि उक्लिन सकेको छैन । तर, परिवार..
काठमाडौँ, ३१ भदौ हाम्रो शरीरलाई रोग अनुसारको ओखती र खानेकुराको जरूरी हुन्छ । यसैगरी कुनै पनि रोग वा स्वास्थ्य समस्यामा विचार गरेर जुस पिउनु उपयुक्त हुन्छ । कुन रोग लाग्दा कुन जुस पिउने आज हामी तपाईंलाई बताउँछौं । भोक नलाग्दा भोक नलाग्ने मान्छेले बिहान खाली पेट कागतीपानी खानुपर्छ अनि खानुअघि अदुवाको पेस्टमा बीरेनुन हालेर खानुपर्छ । रगत सफा गर्न शरीरमा विद्यमान रगतलाई शुद्ध..
डेङ्गु सङ्क्रमितको सङख्या २ हजार नाघ्यो, सङ्ख्या बढ्दै
चितवन, ३१ भदौ जिल्लाका अस्पतालहरुमा साउन महिनायता उपचार गर्न आएका दुई हजार ४६ जनामा डेङ्गुको सङ्क्रमण देखिएको छ । छ हजार ६३९ जनाको नमूना परीक्षण गरिएकामा सो सङ्ख्यामा सङ्क्रमण देखिएको हो । स्वास्थ्य कार्यालय चितवनका प्रमुख दिपक तिवारीका अनुसार दैनिक सङ्ख्या सङ्क्रमित बढ्दै गएको छ । सरकारी र निजी अस्पतालहरु ज्वरोका बिरामीले भरिएका छन् । डेङ्गुको सङ्क्रमण बढेसँगै जनचेतनाका कार्यक्रमहरु निरन्तर रुपमा..
बिहीबार देशभरका सरकारी अस्पतालमा ओपीडी सेवा निःशुल्क
काठमाडौं, ३१ भदाै । दुई गते बिहीबार देशैभरका सरकारी अस्पतालहरुमा निःशुल्क ओपीडी सेवा उपलब्ध हुने भएकाे छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले संविधान दिवसको अवसर पारेर असोज २ गते देशैभरका सरकारी अस्पतालहरुमा ओपीडी सेवा निःशुल्क दिने निर्णय गरेको हाे । मन्त्रालयले सूचना जारी गर्दै असोज तीन गते संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवस भव्यतापूर्वक मनाउने क्रममा संघीय अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थालाई टिकट निःशुल्क उपलब्ध गराउन..
काठमाडौँ, ३० भदौ चिकित्सा अध्ययन संस्थानले चिकित्सा शिक्षाअन्तर्गतका एमबिबिएस, बिडिएस, बिएनएस, बिएस्सी नर्सिङ, बिपिएचको प्रवेश परीक्षा आगामी असोज ३, ५, ६ र ७ गते हुने जनाएको छ। संस्थानको आज बसेको स्नातक तह प्रवेश परीक्षा सञ्चालक समितिको बैठकले सो मिति तय गरेको हो । यसअघि ती परीक्षा यही भदौ २१, २२ , २३ र २४ गतेलाई तय गरिएका थिए । सर्वोच्च अदालतले सो मितिमा..
सुरुङ्गा, ३० भदाै । झापामा डेङ्गु रोगका विरामीकाे संख्या बढ्दै गएकाे छ । ३ महिना अडाडि देखा परेको डेङ्गु रोग अझै नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय झापासहित स्थानीय पालिकालेसमेत प्रभावकारी काम गर्न नसक्दा डेङ्गु रोग नियन्त्रणमा आउन नसकेको हो । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय झापाका अनुसार झापामा अहिले पनि डेङ्गुका रोगी ५०० भन्दाबढी छन् । उनीहरुको झापाका विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको जिल्ला..
काठमाडौँ, २९ भदौ संसारका आधाजसो मानिसहरु खान नपाएर भन्दा खान नजानेर विभिन्न खाले स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित समस्या झेल्दै आएका छन् । चिकित्सक भन्छन्, आवश्यकताभन्दा बढी खाएको खानेकुराले शरिरलाई सञ्चो त गर्दैन नै त्यो खानेकुरा शरीरको लागि विषसरह बन्छ । कुन खानेकुरा कुन समय, कति, कसरी र कस्तो अवस्थामा खाने भन्नेमा ध्यान दिनसके मानिसको स्वास्थ्य धेरै राम्रो हुन्छ। मानिस निरोगी बन्छ। सचेत रहनुस् ।..
काभ्रेपलाञ्चोक, २९ भदौ । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकले डेंगु रोग नियन्त्रणपछि मात्रै समायोजनमा परेका स्वास्थ्य कर्मचारीलाई ‘रमाना’ दिने भएको छ । विशेषगरी तराई क्षेत्रबाट डेंगु रोगको प्रकोप फैलँदै पहाडी क्षेत्रमा समेत सङ्क्रमण बढ्न थालेको अवस्थामा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको आदेशअनुसर जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकले समायोजनमा परेका स्वास्थ्यका कर्मचारीलाई हाल डेंगु रोग नियन्त्रण नभएसम्म रमाना नदिन मातहतका स्थानीय तहका स्वास्थ्य शाखालाई परिपत्र गरेको..
Results 1451: You are at page 17 of 49